सरकारसँग सेना एकाएक रुष्ट ! 'कटुवाल प्रकरण' जस्तै काण्ड मच्चिने खतरा बढ्यो !
काठमाडौं। पछिल्लो समय सरकार र नेपाली सेनाबीचको दूरी बढ्दै गएको छ । सरकारले एकपछि अर्को गर्दै सेनासँगको सल्लाहबिना नै सेनालाई समेत दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने विषयमा निर्णय लिन थालेपछि सेना सरकारसँग रुष्ट भएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
सैनिक उच्च स्रोतका अनुसार नेपालमा सम्पन्न बिम्स्टेक बैठकपछि भारतमा हुने भनिएको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा जानबाट सरकारले सेनालाई रोक्नु, सीके राउतसँगको सहमति हुँदै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध, प्रधानमन्त्रीले नै सेना परिचालन गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न गरिएको प्रस्ताव र पछिल्लोपटक तोकिएको मर्यादाक्रमका विषयमा सेना सरकारसँग रुष्ट छ ।
संविधानको धारा २६६ को राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थामा सुरक्षा परिषद्ले नेपाली सेनाको परिचालन र नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ । तर, सो व्यवस्थाविपरीत अधिकार थप गर्ने गरी विधेयक प्रस्ताव भएको छ ।
प्रकाशित : सोमबार, चैत ११, २०७५११:०९
धनीलाई काखा गरिबलाई पाखा : उद्योगपति ताम्राकारको ठगी धन्दालाई प्रहरीको संरक्षण !